वसन्त Basanta 巴萨塔 バサンタ : साहित्यिक यात्रा चितवनको
साहित्यिक यात्रा चितवनको
गत शुक्रबार र शनिबार (४ र ५ आश्विन) साहित्यमय भएर चितवनमा बिताईयो।
प्रसंग थियो, 'चितवनका कवि र कविता' नामक कविता संग्रह तथा 'चरैवेति' साहित्यिक पत्रिकाको अंक ६ को सार्वजनिकीकरण। र यसैको छेको पारेर आयोजना गरिएको 'संरक्षण' कविता आन्दोलनको ५७औं संस्करण।
शुक्रबार बिहान एउटा टयाक्सीमा श्रद्धेय सरुभक्त दाइ, सहकर्मी मित्र शरण आँसु र कवि-पत्रकार फडिन्द्र अकिञ्चन चितवनतिर लाग्यौं। कविहरु सरस्वती 'प्रतीक्षा', सुरेश रानाभाट, दीपक समीप र प्रकाश ज्ञवाली र कलाकार गौतम बिजुक्छेसंग बिजुक्छेजीको गाडीमा हुनुहुन्थ्यो।
दिऊँसो ३ बजेबाट सार्वजनिकीकरण कार्यक्रम शुरु भयो। 'चितवनका कवि र कविता'मा चितवनका ७८ कविहरुका संक्षिप्त परिचय र ४-४ कविता समेटिएको रहेछ। 'चरैवेति' को अंक ६ मा पनि तिनै कविताहरु संकलित रहेछन्। एउटा लामो र गहन प्रयासपछि संकलित स्वरुपमा निक्लिएका यी कविताहरुले निःसन्देह चितवनको कवितालाई स्पष्ट परिभाषित गर्ने क्षमता राख्दछन् र चितवनका माध्यमबाट वर्तमान नेपाली कवितालाई नियाल्ने आँखीझ्याल पनि हो यो संग्रह।
कार्यक्रममा पोखराबाट पुगेका सबै (११ जना) र चितवनकै केहि कविहरुबाट कविता वाचन पनि भयो।
त्यो रातको बास 'कविडाँडा' (कैलाशपुर?) मा रहेको एल बी क्षेत्री सरको घरमा भयो। एल बी सर र उहाँकी अर्धाङ्गिनीको आतिथ्यमा कवि र कविता मिसिएर निकै रमाईलो भयो। सुत्ने बेलामा साथीहरुले संरक्षण कविता यात्राका पूराना संस्करणका रमाईला संस्मरणहरु सुनाए। मेरो पहिलो सहभागिता, यसैले मसंग केहि संस्मरणहरु थिएनन्। राती सरुभक्त दाइ, एल बी क्षेत्री सर र अरु युवा कविहरुका बीच संरक्षण कविता आन्दोलनको दर्शन, यसको विगत र भविष्यका बारेमा कुराकानी हुँदै थियो धेरै बेरसम्म, अर्धनिद्रामा सुन्नेमा परें म।
बिहान नित्यकर्म, नास्ता, तस्बीर सेसन र आगन्तुक पुस्तिकामा हस्ताक्षरपछि सौराहाको लागि प्रस्थान गर्यौं सबै। सौराहाको जंगल सफारी लजमा फेरि केहि नास्ता लिएपछि डेढ घण्टाको लागि छरिए सबै स्थानीय परिवेशबाट बिम्बहरु टिपेर कविता लेख्न। यसरी निश्चित समयसीमामा बसेर कविता लेख्न बडो गाह्रो हुन्छ, तैपनि केहि कोरें।
जंगल सफारी लजमा फर्केर खाना खाएपछि कविता वाचन कार्यक्रम शुरु भयो। संरक्षण कविता आन्दोलनका सहभागीहरुका कविता सौराहाको प्रकृति र स्थानीय जनजीवनको नजिक हुने कोशिशमा थिए। अरु सहभागीहरु पनि सबैले कविता वाचन गर्नुभयो। चितवन, पोखरा र हेटौंडाबाट भेला भएका थिए कविहरु र काठमाण्डौंबाट पनि कवि-निबन्धकार रोशन शेरचन उपश्थित हुनुहुन्थ्यो।
शनिबार साँझ गौतम बिजुक्छे, दीपक समीप, सुरेश रानाभाट, प्रकाश ज्ञवाली र म पोखरा फर्कियौं।
न्यानो साहित्यिक आतिथ्यका लागि चितवनका साहित्यकार मित्रहरु, एल बी सर र जंगल सफारी लजलाई हार्दिक धन्यबाद! संरक्षण कविता आन्दोलनमा सहभागी हुने अवसरका लागि सरुभक्त दाइलाई हार्दिक धन्यबाद!
साथीहरुले खिचेका तस्वीरहरु फेसबुकतिर छरिएका छन्। मैले भने अचेल कार्यक्रमहरुमा जाँदा क्यामेरा बोक्न छोडिदिएको छु। क्यामरा एक प्रकारको बोझ र बाधा लाग्न थालेको छ :)
Posted by Basanta at 9:58 PM
Labels: कार्यक्रमहरु, यात्रा-संस्मरण
Adams Kevin March 24, 2015 at 2:18 PM
हाजिर जनाऊँदैछु, धेरै पछि